Qiimaha ducada ee bisha Ramadaan !. WQ- Dr-Abdulqani Beder | Haqabtire News
Qiimaha ducada ee bisha Ramadaan !. WQ- Dr-Abdulqani Beder
June 26, 2016 - Written by Aragtida Bulshada
Cilmiga la yidhaahdo “Cilmu tanaasub” ee ka hadla isku xidhnaanshaha suuradaha iyo aayadaha quraanku, waa cilmi la yaab leh oo ay aad u yar yihiin culimada ka hadashaa, aqoonta cilmigaasi loo leeyahayna waa mid aan weli si fiican u faafin.
Haddaad se wax yar dhug u yeelato cilmigaas, ka dibna u fiirfiirsato hab dhaca quraanka, sida suuraduhu isugu munaasibka yihiin, sida qisasku isugu xidhan yihiin iyo sida aayaduhu meel-dhac iyo macna ahaanba isula jaan qaadayaan iyo guud ahaan sida intaasiba isu dhammeystirayso, waxa aad ku raaxaysan doontaa xikmadaha layaabka leh ee kitaabka Alle ku duugan.
Aayadaha suuratal Baqarah ee 183-187 waxay ka hadlayaan Soonka iyo axkaamtiisa, aayadda 186aad in kastoo ay aayadahaas Soonka ku dhex jirto, haddana waxay ka hadlaysaa mawduuc ka gedisan soonka, waxay ka hadlaysaa ducada, munaasibadda halkan loo soo dhex geliyey feker badan dabadii waxaan ku soo ururiyey laba arimood:
2- Ujeedada Soonka loo jideeyey waxa ugu horreeya in qofka soomani kasbado Alle ka-cabsi, Alle ka-cabsigana waxa aasaas u ah caqiido saxan, aayadduna waxay caddeynaysaa jaanib ka mid ah tawxiidka, oo ah keliyeysiga Alle kelida ku yahay xaqa baryada, iyadoon cidna loo sii marin.
Alle waa jecel yahay addoonka baryada badan, ee had iyo jeer ducaysta, halka dadku ay qofka ku nacaan baryada badan, waaba kuwa ku maahmaaha: “Baryo badan iyo bukaan badanba waa laysku nacaa”
Ducadu waa shay fidri ah, oo aadanaha iskaga abuuran, mulxidka aan Ilaahay rumaysnayn, ka mushrigga ah iyo ka gaalka ahiba marka ay xaalad halis ah la kulmaan si doonistooda ka baxsan ayuu dareenkoodu ilaahay keligii u jeestaa oo uu baryaa, waa tajaarib sugan oo dhacdooyin aan tiro lahayn laga hayo.
(Haddii badda dhibi idinku qabsato, waxaad ilowdaan cidkasta oo kale Alle mooyaane, markuu idin soo badbaadiyo ee aad barriga timaaddaan waad jeesataan, Insaanku waa mid gaalnimo badan).
1- Mid ducada ka daalay, ka dibna quustay, ducadiina sidaa kaga tegey.
أتهزء بالدعاء وتزدريه *** وما تدري بما فعل الدعاء
Walaalayaal aynu ku dadaallo ducada, aynu ilaahay waydiisano wanaag oo dhan, mid adduunyo iyo mid aakhiro, aynu ka magan gallo shar oo dhan mid hore iyo mid danbeba.
2- In Allaah ducada kaa aqbalay, hase yeeshee dhibta ku haysata ama khayrka aad codsanaysay wax aan ahayn laguu geliyo, sida in dhib kugu soo socotay lagaaga xijaabo ama khayr kale lagugu siiyo.
3- In Alle kaa aqbalo, hase yeeshee aanad raadkeeda markiiba arag ee aakhiro ajarkeeda laguugu kaydiyo dibna laguugu dhigo.
Ka fogow waxyaalaha ducada lagu celiyo, ducadaada la raadso wakhtiyada ducada la aqbalo, xaaladaha lagu aqbalo, aadaabta ducadana baro.
Ku mahadsanid inaad qof aad khayr la jeceshahay gaadhsiisay.